Driver ပေါင်း သိန်း 20 အထက်ပါဝင်တဲ့ Driver Navigator v3.3.2.21605 Multilanguage (x32,x64) + Keygen ~ IT Guide Myanmar
Wednesday, June 05, 2013 Pyae Phyo (MMiTD) No comments
အခုတင်ပေးလိုက်တဲ့ Driver Navigator ကိုတော့ ဆောင်ထားစေချင်ပါတယ်ဗျာ။ ကွန်ပြူတာ Service သမားတိုင်းဆောင်ထားသင့်တဲ့ Software တစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်ဗျာ။ ဒီ Software လေးက သေးသေးလေးနဲ့ Driver ပေါင်း သိန်း 20 ကျော်ပါဝင်ပါတယ်ဗျာ။ အသုံးပြုပုံကလည်းလွယ်ကူပါတယ်။ Install လုပ်ပြီး Scan Now နှိပ်လိုက်တာနဲ့ မိမိကွန်ပြူတာအတွင်းမှာလိုအပ်နေတဲ့ Driver တွေကို ရှာဖွေပြီး Install လုပ်ပေးနိုင် မှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာ။ လိုအပ်နေတဲ့ Driver တွေကို Install လုပ်ဖို့အတွက်တော့ အင်တာနက်ကွန်နရှင်ရှိထား ဖို့တော့လိုအပ်ပါတယ်ဗျာ။ Windows XP / Vista / Windows7/ Windows 8 (32bit & 64bit) စတာတွေ အားလုံးမှာ အလုပ်လုပ်နိုင်ပါတယ်ဗျာ။
With over 10 years experience helping customers resolve computer driver problems, and backed by over 2,000,000+ driver database, plus industry-leading driver scan technology, Driver Navigator is proud to provide youaone-stop driver solution. Driver Navigator – Your best choice for no more old drivers, no more driver troubles & An easier way to Keep you computer at peak performance!
System Requirements: Windows XP / Vista / Windows7/ Windows 8 (32bit & 64bit)